Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ banyere njem China » Mbugharị China'sbọchị ezumike nke China na-esetịpụrụ ihe ndekọ ọhụrụ
Daybọchị ndị njem Mee Day na China na-egosi mgbake nke obodo ahụ site na ọrịa coronavirus
Njem ndị njem n'okporo ụzọ ụgbọ oloko ndị China rutere elu nke otu ụbọchị
Ndị mmadụ na-enubata na ọdụ ụgbọ oloko, ọdụ ụgbọ elu na saịtị ndị njem nleta, gafere mpaghara
Ọgba aghara ndị njem na-enye akụ na ụba China ike dị mkpirikpi dị mkpirikpi
China State Railway Group Co., Ltd. kwuputara na njem njem ndị njem ụgbọ okporo ígwè ndị China rutere elu otu ụbọchị na Satọde, na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 18.83. Ọnụọgụgụ ahụ gosipụtara mmụba pasent 9.2 site na ọkwa 2019, ụbọchị mbụ nke ụbọchị ezumike ndị ọrụ mba ụwa, nke na-aga na Wednesde.
Mbugharị njem ụbọchị nke May na China na-egosi mgbake nke mba ahụ site na ọrịa COVID-19, ihe ịga nke ọma na mgbasa mgbasa nke coronavirus na mgbasa ozi ịgba ọgwụ mgbochi na-aga n'ihu, na ndị mmadụ na-agbanye n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, ọdụ ụgbọ elu na ebe ndị njem nleta, gafere mpaghara.
N’etiti Eprel, ndị na-enyocha ụlọ ọrụ na-eme njem na China bipụtara amụma amụma maka ezumike ụbọchị Mee, na-egosi na ntinye akwụkwọ ahụwo mmụba dị ukwuu gafere ọtụtụ mpaghara azụmaahịa ma e jiri ya tụnyere ọkwa ọrịa na-efe efe.
N'ihe dị ka Eprel 14, ntinye akwụkwọ ezumike ezumike adịlarị 23 pasent karịa otu oge na 2019, na ntinye akwụkwọ họtel ịrị elu 43 pasent, tiketi mma elu 114 pasent, yana mgbazinye ụgbọ ala gbagoro 126 percent.
Dika otutu ndi njem nleta nke ndi China na-apia uzo maka njem nke ubochi May, oke iwe nke njem na-eme ka onodu aku na uba nke China di ike.
A na-akọwa ezumike ụbọchị ezumike nke 2021 nke China "ogbugba na ogwe aka maka njem nlegharị anya ụlọ" na ezumike ụbọchị ise a na-atụ anya ịbụ ihe na-ejupụta maka akụ na ụba mpaghara nke nsogbu ahụike siri ike.
Ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ njem na ịrị elu nwa oge na mkpọchi okporo ụzọ a tụrụ anya mere ka ọtụtụ mmadụ nọrọ n'ụlọ maka ezumike ahụ, n'agbanyeghị na nke a apụtaghị na ha anaghị emefu.
Ememme ịzụ ahịa nke abụọ "May 5" malitere na Shanghai, yana ezigbo oge ịkwụ ụgwọ data si China UnionPay, Alipay na Tencent Pay - niile nyiwe ugwo nke China - na-egosi na ndị na-azụ ahịa gbanwere ihe karịrị ijeri dollar 2.67 na 24 nke mbụ.